I-Luxury Beachside Villa enama-Sunset amangalisayo
(73 okushiwo abanye)
Cuvu, Western Division, i-Fiji
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Clarke
Amakamelo okulala anomoya opholile angu-3, Amagumbi okugeza angu-2, Ikhishi eligcwele, Indawo yokuphumula, Indawo yokudlela, Iwashi.
Izindlu ezi-4 zikaMalaqereqere eziklanywe ngendlela yokwakha zivumelanisa isitayela nezinto zokwakha nokunethezeka kwesimanje ukuze kudalwe ukulungiselelwa okuphelele kweholide lakho. Kuthule ngokuthula okubheke i-Pacific.
I-Malaqereqere Villas izinikele enhlalakahleni yakho futhi isigunyazwe nguHulumeni wase-Fijian njenge-CareFiji Commitment. Lonke Ithimba lethu seligonywe ngokugcwele
I-Malaqereqere Villas ihlinzeka ngendawo ekahle yokubalekela umndeni.
Jabulela ukuphumula eduze kwechibi noma kuvulandi. Ukuzola kweMalaqereqere Villas kuzovumela umndeni wakho ujabulele isikhathi esinokuthula ungekho ekhaya.
Ukudoba olwandle olujulile noma uhambo lwe-scuba diving lusebenza njengohambo oluhle kakhulu. Umndeni wakho uzojabulela okwenziwayo okumangalisayo ukufunda mayelana namanzi aluhlaza okwesibhakabhaka aseduze nokubamba isidlo sakusihlwa.
Abasingathi bethu eMalaqereqere Villas bazokujabulela ukuhlela uhambo
I-Villa ngayinye inamagumbi okulala amathathu anomoya opholile, (amakamelo ama-2 ngalinye linombhede wendlovukazi, elinye linemibhede emi-2 eyodwa), amagumbi okugezela amabili, igumbi lokudlela kanye negumbi lokuphumula. Ngekhishi le-ultra-yesimanje kanye nelondolo ungakwazi ukuzimela ngokuphelele. I-Villa ngayinye inendawo yayo yangasese ye-BBQ.
AmaVillas ahlinzekwa ngokugcwele nsuku zonke.
Ukupaka mahhala emgwaqeni ongenayo emagcekeni
Kwabiwe ngaphandle i-pool
Imahhala umshini wokuwasha – Kuyunithi
Imahhala umshini wokomisa – Kuyunithi
4.96(73 okushiwo abanye)
4.96 · 73 okushiwo abanye
IMalaqereqere Villas itholakala phakathi kweMizana eminingi yendawo. Uzothola ukuhamba ngomgwaqo osogwini oseduze, ubuhle nokufudumala kwabantu baseFiji. Ukubingelela kwendabuko kokuthi "Bula" kuzokhala maduze ezindlebeni zakho! Iphephe kakhulu futhi inobungane.
Abaphathi bethu Jikelele Bezakhamuzi, u-Rusi no-Kelera banolwazi olunzulu embonini yezokuvakasha yase-Fijian futhi bazokujabulela ukusiza nganoma iyiphi indlela. Bahlala esizeni futhi batholakala 24/7
UClarke Ungumbungazi ovelele